Saturday October 06, 2018 - 18:36:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weeraro dhiigbadan ku daatay ayaa markale ciidamo Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan ah ku qabsaday deegaanno dhaca bariga gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Beled Weyne iyo Buula Burde ayaa sheegaya in dagaallo culus oo ay barbar socdeen qaraxyo ay shalay ka dhaceen.
Ciidamo ka baxay deegaanka Halgan kunasii jeeday dhanka Buula Badre ayaa lakulmay weeraro xooggan, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jabuuti qaraxyo is xigxigay lagula eegtay halka loo yaqaan Beera Yabaal oo udhow deegaanka Halgan.
Dad xoola dhaqata ah ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqleen jugta qaraxyo iyo rasaas xooggan, ciidamadan huwanta ah ayaa maalintii 9 aad oo xiriir ah shalay weeraro kula kulmay wadada laamiga ah.
Wariye Nuur Cali Warsame oo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa sheegay in maanta kaliya ciidamada Itoobiya ay wadada laamiga ah kula kulmeen illaa 5 weerar dhabbagal ah iyo laba qarax.
Weerarka ugu culus wuxuu ka dhacay deegaanka Wariire oo udhaxeeya magaalooyinka Buula Barde iyo Halgan oo wada tirsan gobolka Hiiraan, ciidamada Itoobiya iyo ciidamo kale oo ka yimid dhanka Buula Barde ayaa wadada ku kulmay waxaana la sheegay in caawa ay ku hoyanayaan meel aan ka fogeyn Buula Barde.
Isbuuc ka hor ayay ciidamadan wadanjirka ah kasoo baxeen magaalada Beled Weyne waxayna isku dayayaan in ay saad ciidan geeyaan magaalooyinka Buula Barde iyo Halgan oo muddo sanada ah ku go'doonsanyihiin ciidamo shisheeye oo magaca AMISOM ku jooga Soomaaliya.
Waa markii ugu horraysay oo muddo 2 sanadood gudahood ah ay ciidamada Itoobiya ay isku maqiiqaan wadada laamiga ah ee isku xirta Buula Burde iyo Halgan halkaas oo go'doon adag uu saarnaa sanadadii lasoo dhaafay walina waa kuwa weerar sugayaal ah oo aan gaarin halkii ay tiigsanayeen.